Àjà a na-esu ọkụ (1-17)
1 Jehova wee kpọọ Mosis ma si n’ụlọikwuu nzute+ gwa ya okwu, sị: 2 “Gwa ndị Izrel okwu, sị ha, ‘Ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime unu chọrọ iji anụ ụlọ chụọrọ Jehova àjà, unu ga-esi n’ìgwè ehi ma ọ bụ n’ìgwè ewu na atụrụ unu weta anụ unu ga-eji chụọ ya.+ 3 “‘Ọ bụrụ na ọ ga-esi n’ìgwè ehi weta anụ a ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ, ọ ga-eweta oké ehi ahụ́ dị mma.+ Ọ ga-eji obi ya+ weta ya n’ihu Jehova, n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute. 4 Ọ ga-ebikwasị aka ya n’isi anụ ahụ a ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ. A ga-anabatakwa ya ka e jiri ya kpuchiere ya mmehie. 5 “‘A ga-egbu oké ehi ahụ n’ihu Jehova. Ụmụ Erọn, bụ́ ndị nchụàjà,+ ga-eche ọbara ya n’ihu Chineke ma fesa ọbara ahụ n’akụkụ niile nke ebe ịchụàjà ahụ+ dị n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute. 6 A ga-agba anụ ahụ a ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ akpụkpọ ma gburie ya.+ 7 Ụmụ Erọn, bụ́ ndị nchụàjà, ga-etinye ọkụ n’ebe ịchụàjà+ ma sonye nkụ n’ọkụ ahụ. 8 Ụmụ Erọn, bụ́ ndị nchụàjà, ga-edo anụ ahụ e gburisịrị egburisị+ n’usoro, dosakwa isi ya na abụba ya* n’elu nkụ e sonyere n’ọkụ ahụ dị n’ebe ịchụàjà. 9 A ga-eji mmiri saa eriri afọ ya na ụkwụ ya. Onye nchụàjà ga-esukwa ha niile ọkụ ka ha kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà. Ọ bụ àjà a na-esu ọkụ, àjà na-esi ísì ọma* a na-achụrụ Jehova.+ 10 “‘Ọ bụrụ na ọ ga-esi n’ìgwè ewu na atụrụ+ weta ebule ma ọ bụ ewu a ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ, o kwesịrị iweta oké nke ahụ́ dị mma.+ 11 A ga-egbu ya n’akụkụ ebe ugwu nke ebe ịchụàjà n’ihu Jehova. Ụmụ Erọn, bụ́ ndị nchụàjà, ga-efesa ọbara ya n’akụkụ niile nke ebe ịchụàjà.+ 12 Ọ ga-egburisị ya. Onye nchụàjà ga-edokwa ha n’usoro, ma isi ya ma abụba ya,* n’elu nkụ e sonyere n’ọkụ ahụ dị n’ebe ịchụàjà. 13 Ọ ga-eji mmiri saa eriri afọ ya na ụkwụ ya. Onye nchụàjà ga-esukwa ha niile ọkụ ma mee ka ha kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà. Ọ bụ àjà a na-esu ọkụ, àjà na-esi ísì ọma* a na-achụrụ Jehova. 14 “‘Ma, ọ bụrụ nnụnụ ka ọ ga-eweta ka e jiri chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ, ọ ga-esi ná nduru ma ọ bụ n’ụmụ kpalakwukwu weta ya.+ 15 Onye nchụàjà ga-eweta ya n’ebe ịchụàjà, tụbie ya olu ma suo ya ọkụ ka ọ kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà. Ma ọ ga-ahapụ ya ka ọbara ya gụsịa n’akụkụ ebe ịchụàjà. 16 Ọ ga-ewepụ akpa nri ya, tụpụsịa ábụ́bà* ya ma wụsa ha n’akụkụ ebe ịchụàjà, n’ebe ọwụwa anyanwụ, n’ebe a na-ekposa ntụ.*+ 17 Ọ ga-esi n’agbata nku ya abụọ nyawaa ya, ma ọ gaghị anyakapụ ya anyakapụ. Onye nchụàjà ga-esu ya ọkụ ka ọ kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà, n’elu nkụ dị n’ọkụ. Ọ bụ àjà a na-esu ọkụ, àjà na-esi ísì ọma* a na-achụrụ Jehova.
^ Ma ọ bụ “ugbene.”